Gravity Media သည်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည် NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Gravity Media သည်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည်
Gravity Media သည်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည်
သိသာထင်ရှားသည့်ကိရိယာနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အလွန်ဝေးလံခေါင်ဖျား။ မျိုးစပ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုလွန်ကာလ၌အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။Covidien ခေတ်
ဆွဲငင်အားမီဒီယာ ၎င်း၏လန်ဒန် post-production ပူဇော်သက္ကာဘို့အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ သိသာထင်ရှားသောပမာဏကိုကိရိယာများအဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့်၎င်း၏ရေပန်းစားသော ၀ န်ဆောင်မှုခံထားရသောစက်ရုံအားလန်ဒန်၏ Soho ၏အလယ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်ဒရာမာနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်တိုးချဲ့ကိရိယာများအတွက်အသုံးစရိတ်များကိုသုံးစွဲနေသည်။
ကူးစက်ရောဂါနှင့်နောက်ဆက်တွဲပိတ်ဆို့မှုပေါ်ပေါက်ရေးs ဝယ်လိုအားသိသိသာသာတိုးလာခဲ့သည် အဝေးထိန်းတည်းဖြတ်မှု။ တုံ့ပြန်မှုအတွက်, Gravity မီဒီယာ'' s ကို ကျွမ်းကျင်သူ အသင်း In-အိမ်သူအိမ်သား အင်ဂျင်နီယာများ စည်းရုံးသိမ်းသွင်း လျင်မြန်စွာ သို့ ဒီဇိုင်း၊ အကျိုးရှိစွာနှင့်လုံခြုံလုပ်ငန်းအသွားအလာ ဒီကိုထောကျပံ့ဖို့. Post- အဖြစ်Covidien ခေတ်ချဉ်းကပ်မှုအနေဖြင့် Gravity Media သည်အနာဂတ်တွင်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်သိသာသောပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်ရပ်ကွက် စပ်အလုပ်မော်ဒယ် ing.
၎င်း၏အဓိကအရာမှာ Gravity မီဒီယာတွင် Gravity Media မှတည်ထောင်ခဲ့သော Frith Street အခြေစိုက် Gravity House ဖြစ်သည်။ 2017 သို့ မှဖြတ်တောက်ခြင်းအခန်းများပေး အဓိကစတူဒီယိုများ၊ streaming ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ထုတ်လွှင့်သူများအတွက်ပရီမီယံဇာတ်လမ်းတွဲနှင့် feature-length အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်သူများ။ မီဒီယာနှင့်အတူလုံခြုံစွာသျော လွန်စွာလိုလားသော NEXisite ပေါ်တွင်မျှဝေသိုလှောင်မှု, editors သည်သူတို့နှစ်သက်သောနေရာမှသုံးနိုင်သည် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer နှင့် HP ဟာ့ဒ်ဝဲ နေဆဲအတွက်အသုံးချနိုင်ဖြစ်ခြင်းနေစဉ် ၏အကျိုးကျေးဇူးများ ရည်ရွယ်တည်ဆောက် အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် 24/7 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှု ရရှိနိုင် Gravity House မှာ။ Leostream အပါအဝင်မျိုးစုံသော cloud-based န်ဆောင်မှုများမှအသွားအလာကိုကိုင်တွယ် Teradici, HP က ZCentral, Amulet Hotkey နှင့်လုံခြုံသောဂိတ်ဝေးတစ်ခုနှင့်ရိုးရိုး interf ကိုထောက်ပံ့ရန် Windows Remote သည်ace. Gravit တွင်အဖွဲ့လိုက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုံခြုံစွာပြုလုပ်နိုင်သည်y House, ဒါမှမဟုတ်အဝေးမှ Apple TV ကိုသုံးနိုင်သည်.
သော့ချက် ၁နည်းပညာအသစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် Am ပါဝင်သည်uHotkey ကြကုန်အံ့ DXZ4 Quad Zero Clients၊ PC အတွက် DXH4 Quad Host Card များနှင့် Mac အတွက် DXT-H4 Host Units, လည်းပဲ အစွမ်းထက်သော HP က ZCentral 4R 1U workstations နှင့် Sienna NDI streaming ဖြေရှင်းချက်။
"ဒီအပြုသဘောပြန်လည်action ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကနေကမ်းလှမ်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရန် ဝေးလံခေါင်ဖျားအလုပ်လုပ် ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ ကူးစက်ရောဂါအလိုတော်စဉ်အတွင်း ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကိုကြည့်ပါ တစ် ဦး သို့ဖွံ့ဖြိုး ပိုပြီးထူထောင် စပ်ပုံစံ ကန့်သတ်လွယ်ကူအဖြစ်"ဟုပြောသည် Meryl McLaren, Gravity Media EMEA မှမီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဒါရိုက်တာ. "ကောင်းတယ် ဘယ်နေရာမှာမဆိုလုပ်ကိုင်ဖို့ option ကိုရှိသည်, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာ အစစ်အမှန် ဖန်တီးမှုအားသာချက်များ ခဲ့ခံရဖို့ အခါ, လူတစ် ဦး ကိုအိမ်တစ်အိမ်အောက်ပြန်ခေါ်လာသည်။ အဆိုပါနည်းပညာငါတို့ပြုလုပ်နေသော ology နှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်ဤပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံကိုနောက်ထပ်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည် နှင့်ကျွန်တော်တို့ကို enable ဆက်လက် ရေရှည် တိုးတက်ရေး။ "
ကြိမ်မြောက်၏ကြီးမားသောစာရင်းနှင့်အတူe ရရှိနိုင်နောက်ဆုံးပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် tools တွေကို, Gravity မီဒီယာ စွမ်းရည်ရှိတယ် ပို့ နှင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားအလုပ်လုပ်ဘို့ဟာ့ဒ်ဝဲ packages များ install လုပ်ပါ အပါအဝင် standalone အော့ဖ်လိုင်းပြင်ဆင်မှုများ, အဆင့် နှင့် ဒူဘ Adobe သုံးတဲ့လက်တော့ပ်တွေအပြင် Creaမည်သည့် loc မှ tive တိမ်တိုက်ation.
Gravity Media သည်ရှုပ်ထွေးသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်များနှင့်ထုတ်လုပ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများကို ဦး ဆောင်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးသူဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ၊ ဖန်တီးသူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုစုပေါင်းဆွဲဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီသောအရာများကိုလှုံ့ဆော်ရန်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစေရန်ဖန်တီးရန်၊ ဖန်တီးရန်နှင့်ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 500 လူများသည်ယူကေ၊ Australiaစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီနှင့်ကာတာစသည့်အခြေစိုက်စခန်းများမှအားကစား၊ မီဒီယာ၊
Gravity Media သည်နှစ် ၃၀ pedigree ပါ ၀ င်သောကုမ္ပဏီသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုလူသိများသောအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအိမ် ၄ ခုမှဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။ Gearhouse Broadcast, HyperActive အသံလွှင့်၊ Input မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးချုပ်။
ဒရာမာ အင်္ဂါရပ်များ စပ် Post- ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု post ကိုထုတ်လုပ်မှု ဝေးလံခေါင်သီတည်းဖြတ်ခြင်း ဝေးလံခေါင်သီ Post- ထုတ်လုပ်မှု 2021-04-07
ယခင်: Ekstraklasa သည် Red Bee ကို Ekstraklasa.TV အတွက်နည်းပညာအသစ်မိတ်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်သည်
နောက်တစ်ခု: Maxon သည်3Dပြီလသုံးရက်ကြာ XNUMXD & Motion Design Show ကိုကြေငြာခဲ့သည်